ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပညာရှင်တွေ ကန့်ကွက်
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပညာရှင်တွေ ကန့်ကွက်
VOA - 24.08.2014 22:51
“ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သက်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ ဥပမာ- ကျောင်းသား သမဂ္ဂတွေမဖွဲ့နိုင်ဘူး၊ ဆရာများသမဂ္ဂတွေလည်း မဖွဲ့နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့ အခု ကျနော်တို့ ဆရာများသမဂ္ဂကလည်း ပညာရေး ဥပဒေအရ လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ အလုပ်သမားဥပဒေအရ ဖွဲ့ထားတဲ့ အခြေအနေပဲဗျ။ အဲဒီတော့ အခုချိန်ထိက ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သက်ရောက်တာကတော့ အများကြီးပဲလေ။ မပြောင်းလဲဘူး။ ဥပမာ သမ္မတက ပြောတယ်ဗျာ၊ -First wave, 2nd and Third waveထဲမှာ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အပြောင်းအလဲ လုံးဝ မပါဘူး၊ ပါလာတဲ့အချိန်ကျတော့လည်း အခု အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေကျတော့လည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အင်မတန် ပညာရေးစနစ်ကို ဆိုးဝါးစေနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိကို ရောက်သွားတာ ခင်ဗျ။”
Aung Aung Myat said...
I want the original link of this article. Can you please give me?